Pclinux os, nnukwu nhọrọ maka ndị ọrụ nkịtị | Site na Linux
Pclinux os, nnukwu nhọrọ maka ndị ọrụ nkịtị
Ugboko92 | | Ọdịdị / Nhazi, Nkesa, GNU / Linux
Echetaram oge ikpeazu gara aga, dika afo obula m gara ezumike na Italytali, n’oge ahu m ka na eji ya Archlinux Ma ebe ọ bụ na enweghị Internetntanetị na ụlọ ezinụlọ m, azụrụ m igodo 3g Usb. Echetara m na m gbalịrị ijikọ na Arch agbanyeghị, mana otu ihe ọ na-arụ mgbe niile, na njedebe ya ejikọtaghị netwọk Vodafone.
Mgbe ahụ, echetara m distro nke na-abịarịrị na ngwaọrụ ndị dị njikere, ebe ọ bụ na m nwere diski ahụ, m wụnye ya. Ihe si na ya pụta bụ na enwere m ike ijikọ na-akpaghị aka site na netwọk etiti nke PClinux os. Mgbe m laghachiri ezumike m ehichapụrụ m PCLinux Gị ọzọ, n'oge ahụ m ka nwere mmasị isusu ọnụ, mana na njedebe oge ahụ gafere, amalitere m iji ya Windows 7 site na isiokwu nke ulo akwukwo (ohere, Excel na ebe ike) ma mechaa wụnye oS X.
Emechara m laghachi azụ Linux, M arụnyere na LTS nke ubuntu 12.04 na mgbe ụbọchị 4 nke iji ya, mmelite ọjọọ mere ka m ghara ịnụ ụda ahụ, belụsọ maka ekweisi na ahụhụ m kọọrọ ka na-emeghe ...
Mgbe ahụ, m gbalịrị Debian na ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe ọjọọ, ọ bụghị n'ihi na m, echichi nke proprietary ọkwọ ụgbọala nke AMD Dị ka mgbe ọ bụla m na-eji Debian ọ gaghị ekwe m omume, mgbe ịmalitegharị pc ihe niile na-aga nwayọ nwayọ, na-echegbu onwe m maka ịhapụ mkpụrụ akwụkwọ, ebe ụgbọ mmiri na ihe ndị ọzọ anaghịzi eme m ma m cheta PCLinux OS.
PClinux os O nweela ndị ọkaibe na catalyst na ndabara, yana ọfụma arụmọrụ m nwetara dị mma karịa na distros ndị ọzọ, ma e wezụga na m na-ahụ desktọọpụ ngwa ngwa na bfs kernel.
Nsogbu bu na distro a adighi nma * nsụgharị *, ka na-eji KDE 4.6.5 ma site na nke ahụ anyị ga-enwe nnukwu nkwụsi ike. Mmetụta ndị na-ese ihe ngosi, mana n'otu oge ahụ masịrị m ịhụ otu m si hụ ihe nkiri na osooso xvba akpa, Anaghị m ata ahụhụ karịa akwa, nke dị na Uọnwụ nwụrụ anwụ n'agbanyeghị ole m họọrọ ma deselected compiz nhọrọ, M ike wepụ ya.
Na nke ikpeazụ Nwepụta, VLC 2.0, ebe nchịkwa nke PClinux os nke dị ebube, ọdịdị ya na ndabara kwa, yana nke ọma dị ka njikwa ngwugwu, ụdị sọftụwia niile dị na nchekwa, dịka monodevelop, qtcreator, kdevelop na ọnụnọ nke kernel bfs, na-eme nke a Ntọhapụ Ntugharị megharia nhọrọ dị ukwuu maka onye ọrụ nkịtị, nke na-egosi anyị na nkwụsi ike na ịhapụ ntọhapụ ga-ekwe omume.
Budata pclinux os
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Pclinux os, nnukwu nhọrọ maka ndị ọrụ nkịtị
Gụ ihe gbasara PCLinux OS ibe o kwuru na ọ na-eji OpenOffice, ọ gafeela ma ọ bụ na ọ so na distros ole na ole ka gụnyere ya?
M na-aza onwe m, na peeji nke abụọ na nsụgharị ọ kwuru banyere a LibreOffice installer, LibreOffice Manager, ya mere na ọ bụ naanị ihe mgbe ochie page «About PCLinux OS»
Mgbe, ihe karịrị otu afọ gara aga, ekpebiri m ịhapụ Ubuntu ma nwaa nhọrọ ndị ọzọ, nke a bụ otu n'ime nsogbu mbụ m jiri. Enwere m mmasị na mgbanwe ya na ọsọ ya, ọ bụ ezie na achọpụtara m na KDE adịghị arụ ọrụ dị ka ndị ọzọ. Enweghị m ike ileghara anya na ọ ghọtara ngwaike nke laptọọpụ m n'enweghị nsogbu. Naanị ihe ndọghachi azụ nke dakwasịrị m bụ nke eserese: n'oge mmalite, ihuenyo ga-agbanwe mkpebi ma ị ga - eme mgbanwe akwụkwọ ntuziaka ozugbo usoro malitere. n'èzí nke ahụ, ọ dịghị ihe ọzọ. ọtụtụ ngwanrọ dị, mmelite oge niile, na ọtụtụ nkwụsi ike. otu n'ime ndị ọkacha mmasị m !!!
oh na m chefuru, o ghawara uche m ichota onwe m synaptic, hehe, o di nma.
Na-abịa site na Mandriva, ejiri m distro a na ngalaba Linux m ogologo oge ma ọ dị mma. Otu n'ime arụmọrụ kachasị mma, ngwa ngwa ma kwụsie ike nke KDE nke m hụworo. Ahapụrụ m ya n'ihi mkpebi ụfọdụ nke onye nrụpụta ya, bụ Texstar, iji melite KDE, ma ọ bụ mmemme dịka Amarok.
Na-ekwesị ntụkwasị obi nye KDE, ugbu a, m na-anwale Kubuntu 12.04 ma ọ na-eme ka m kwenye. Ma eleghị anya, nye Mageia 2 nwaa, ma ọ bụ laghachi na PCLinuxOS ma see anwụrụ ọkụ nke Texstar.
Zaghachi na Paefes
Nwara OpenSUSE? Have nwere KDE kachasị ọhụrụ (mmelite nke KDE 4.8.4 bịakwutere m ụnyaahụ), ụdị ndị kachasị ọhụrụ nke ngwa niile dị na ịbụ, yana ọ nwere nnukwu nkwụsi ike.
Abụkwara m onye ọrụ Mandriva na PCLinuxOS, ugbu a abụ m onye ọrụ OpenSUSE na eziokwu bụ na enwere m obi ụtọ na ya.
Echiche gị bụ ihe na-atọ ụtọ ma ana m ekerịta ihe ị na-ekwu.Ọ bụ ezie na anaghị m eji Pclinux OS emechaala m ọkwa nke ịlụ ọgụ na sistemụ na ịwụnye otu ihe n'otu oge. Sistemu mebiri ugboro abụọ maka mmelite na igwe arụmọrụ, yabụ atụfuru m ya kpamkpam. Abụ m onye ọrụ na onye na-agbachitere Debian mana ekwesịrị m ikweta na ọ bụghị maka onye ọrụ njedebe, sistemụ ngwungwu ya bụ isi ọwụwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwe mmemme ọhụrụ.
Dị ka @VaryHeavy Echere m na OpenSUSE bụ nnukwu nkesa ma ana m amaja ịsị na ọ bụ ezigbo nkwụsi ike na elekwasị anya na onye ọrụ ọfụma.Mgbe m rụnyere ya, m mere ya n’ebumnuche nke imebi ya agbakwunyere m tinye nchekwa ndị dị na mpụga (nke yiri na Ubuntu's ppas) Agbakwara m tinye ebe nchekwa ụlọ ọrụ kde ma ọ bụrụ na sistemụ ahụ adịghị akwụsi ike, ị nwere ike ịlaghachi na mmepe repo dịka ihe ntanetị zypper dị mfe site na repo-ị chọrọ ma ọ bụ gaa ileta ụlọ ọrụ na ị nwere sistemụ kachasị ọhụrụ Ekwesiri ikwuputa na otutu ndi mmadu gha eji KDE, n'etiti ha Chakra buru ihe ndi ozo nke kde site na OpenSUSE well .ma dika m na agaghari.
ihe ikwuru banyere emegheSUSE bu ihe kacha masị m.
zypper si na repo…
Zypper rue LEEEENTO xD
zypper nwere ahụhụ dị omimi nke m kọọrọ na amaghị m ma ọ bụrụ na ha emelitere ya, mana mgbe m nwere 30 megabytes vdsl nke movistar Spain, zypper ji m ipv6, na ọbụna deactivating ipv6, ihe niile na-aga naanị 50, kacha 60 kb / s, ọ bụ mgbanwe ụlọ ọrụ na nke ahụ kwụsịrị ime, ọ bụ naanị meghere m na oghere.
Ọ dị nwayọ. Zypper ka mma nke ukwuu ma na-arụ ọrụ ugbu a nke ọma, ọ na-ebudata nnukwu ogbe mmelite ngwa ngwa.
Iji kwuo na iwebata delta-rpm arụkwala ọrụ ya iji melite njikwa melite, ebe ọ bụ naanị akụkụ nke ngwugwu a na-ekwu maka nke a gbanwere ka emelitere, si otú a na-ezere inwe ibudata ngwugwu zuru oke ma hapụ ọtụtụ ihe ibudata okporo ụzọ.
Yabụ ịnwabeghị OpenSUSE kemgbe ole mgbe?
M arụnyere nyocha oge ikpeazụ na 11.4, na 12.1 ndụ USB anaghị arụ ọrụ nke ọma ọbụlagodi na m na-eme ya na iwu dd, na mgbe ị na-etinye mkpọtụ ...
Nwere ike ịnwale ya na ngwa "Imagewriter", nke dị na nchekwa OpenSUSE, site na igwe arụmọrụ dị ka ihe atụ. Iji ngwa a Live USB anaghị ada ada.
Aga m agbali na windo nwere vmware iji hu hehehe.gam agwa gi.
Ana m eme ya na dd_rescue n'ihi na nke ahụ bụ etu ọ dị na wiki en.opensuse.org/SDB:Live_USB_stick mana o doro anya na ọ bụ naanị dd
Mmemme m oge ochie anaghị enye m nsogbu ma ọ bụrụhaala na ha na-arụ ọrụ zuru oke, nke ahụ esitụbeghị m ike ikwu. Mana echere m na naanị ihe m kwesịrị ịma gbasara PC-LinuxOS bụ ma ọ bụrụ na ụdị 32-bit bịara na PAE kernel na ndabara, n'ihi na ọ bụrụ na m jiri nke 64-bit, aga m aga hell na ọtụtụ ihe M na-eji.
Ọ bụghị na ndabara nwere ụdị 32-bit bfs nke naanị na-amata 3,5 gigs, kernel pae dị na nchekwa ma ị nwere ike ịwụnye ya ma emechaa, ọ bụ ezie na m họọrọ ịghara ime ya n'oge ahụ.
(Ana m ede ihe site na pc ọzọ)
Kedu ihe dị iche na nkpuru abụọ ahụ?
Ekwesịrị ka kernel pae bụrụ kernel nkịtị maka ndụ, na bfs bụ nke emere iji melite nzaghachi na desktọọpụ, ana m ekwu eziokwu n'eziokwu bern kernel karịa kernel nkịtị, na pc a ebe m nwere chakra, edekọtara m ya ma achọpụta m ihe dị iche.
PCLinuxOS enweghị 64-bit, naanị ụdị 32. A nụrụ ya ogologo oge gara aga na e mere atụmatụ 64-bit na mmepe, mana dịka ọ dị taa, ọ dịghị ihe doro anya a maara.
64-bit dị na mmepe, n’eziokwu ị nwere ike ibudata isos. Eji m obi m uto na mmalite amaghi, uzo ijikwa ulo oru ndi ahu di ka o bu ihe ojoo n’aru m, n’ime pclinux dicha ocha, ma e nweghi ihe ndi ozo a na-abanye na ndi ozo kwesiri ya, ya bu na o dighi anya, o bu kde di ocha.
Na ọdịdị ahụ anaghị elekọta ya na OpenSUSE? : S Ekwetaghị m kpamkpam, kpomkwem OpenSUSE bụ otu n'ime ndị na-elekọta ihe na nke kachasị mma KDE. Ọ bụrụ na anyị ga-ekwu maka Fedora, agaghị m arụ gị ụka, n'ihi na nke ahụ na-abịa na gburugburu dị ọcha, mana ọ bụghị ikpe na OpenSUSE. Ihe na-esiteghị na ọkwọ ụgbọala nke ọma na ndabara bụ ihe nkịtị na usoro okike Linux.
Na nwoke, ma ọ bụrụ na anyị ejiri nchekwa OpenSUSE na nke PCLinuxOS, n'ezie ọ dịkarịrị na PCLinuxOS, n'eziokwu ma ọ bụrụ na anaghị m emehie, ọ na-eji otu nchekwa maka ihe niile. N'agbanyeghị nke ahụ, enwere m ike ịsị na anaghị m achọ ihe ọ bụla na OpenSUSE, a na-emelitekwa nchịkọta ahụ kwa ụbọchị, nke m na-ahụbeghị ugbu a na nke ọ bụla ọzọ m jiri.
Na ọdịdị nke budeuse ihe m hụrụ bụ isiokwu kde nke ndụ m na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ..., nke ahụ adịghị ka m na-elekọta ọdịdị ahụ, mkpụrụedemede amaghị ma ọ bụrụ na ọ bụ m kpatara, mana ha na-eme egosighi ire ụtọ ọ bụla na nkwụnye ego bụ ọgbaghara, oge ikpeazụ m ji 12.1 gwuo ha, emebiri m ntụkwasị obi maka ọtụtụ mmemme, abụ m distro na agaghị m akwado onye chọrọ iji ya na-enweghị ịmụ oke.
Nke a adịghị ka ọ na-elekọta m anya
Ọfọn, na-atọ ụtọ agba mgbe niile.
Ọ bụ eziokwu na isi mmalite adịghị mma, nke ahụ bụ ihe mbụ m gbanwere site na mbido, mana ndị ọzọ, dị ukwuu.
Banyere nkwụghachi na ntụkwasị obi ... nke ọma, Amaghị m etu i si mee ya, n'ihi na mgbe ị na-emelite ngwugwu sitere na YaST, ọ na-eme ka ị mata ma ọ bụrụ na esemokwu na ndị ịdabere na ya na-enye gị ọtụtụ omume ịme, site na idobe ngwugwu, iji melite ndị dabere ma ọ bụ gbanwee ebe nchekwa ya, ma ọ bụ dọwaa ngwugwu na ihe ọghọm gị.
Ma enweghi nsogbu na ebe nchekwa, n'agbanyeghị ole ha dị, mana ị ga-eburu n'uche nke ndị agbakwunyere, dịka ọmụmaatụ, ịnweghị ike iji nchekwa mbipute nke ụdị yana n'otu oge nchekwa Tumbleweed (nke na-agagharị) -tọhapụ ụdị), n'ihi na o doro anya na n'oge ụfọdụ ihe ga-agbaji. Ejikwala nchekwa nke mbipụta KDE dị iche iche n'otu aka ahụ, ya bụ, ọ bụrụ na ị nwere KDE 4.7 ma chọọ idobe ya, agbakwunyela ebe nchekwa KDE 4.8, maọbụ ọ bụrụ na ị wụnye KDE 4.8, hichapụ nchekwa KDE 4.7, ha doro anya ihe, nri?
Dịka ọmụmaatụ, ahaziwo m nchekwa dị mma maka ụdị + ụfọdụ nchekwa obodo nke masịrị m + ndị nke KDE 4.8, enweghị m nsogbu ọ bụla.
Ogbe 6 dijo
Ihe PC m Linux os na-eme m nnukwu OS, na APPS ya abụghị ihe mgbe ochie mana na KDE SC, na okwu ole na ole PCLOS abụghị na ọ bụghị maka ụdị nsụgharị
Ee, mana enweghi ụzọ ịlele ndepụta nke nchịkọta iji mata ebe nsụgharị na-aga na akụkọ ahụ dum.
Naanị chọọ ntakịrị xd
na-ekwu 2010 mana n'ezie ha bụ xD ugbu a
pkgs.org, obere padawans 😛
Echefuru m nkọwa ahụ ... xD
Nnukwu nhọrọ na-enweghị mgbagha, ọ ka njọ na m na-anọ na Chakra
mu onwem kwa !!!! Iwu Chakra !!!! 🙂
N'ịbụ onye sitere na onye ọ bụ na inwe Drakes ya, ọ bụghị ihe ijuanya etu o si arụ ọrụ maka gị 😉
O sitere n'aka onye?
Nweta nke Mandriva heheh
Dị ka pandev na-agwa gị, PCLinuxOS bụ ndụdụ nke Mandriva, karịa, Mandrake 9.2 (Texar bụ onye nrụpụta Mandrake), agbanyeghị na ọ na-agbakwunye mmelite niile ewebatala kemgbe Mandriva, ọkachasị drakes.
Na Pclinuxos ị nwere ike unasar ikike ma ọ bụ naanị dabara?
Asụsụ Arangoiti dijo
Naanị APT, ekele.
Onye ozo bu Rolling Release 😉
Obi abụọ adịghị ya, nwa oge gara aga ule ahụ, ezigbo ngwaike ngwaike, ụdị m jiri bụ nsụgharị ya na LXDE.
Ọ ga-abụ nke dị nwayọ dịka ha na-ekwu na obodo m, mana ihe m bụ agaghị m agbaghara SuSE maka ịrara ngwanrọ n'efu, ha nwere obere ihe ha ga-eme Microsoft Linux.
Mba adighi m egwu egwu 🙂
Zaghachi igwe mmadu
Mintbox: Linux Mint Obere PC
Linux maka Doomies I. Gini bu Linux na Linux emelitere.